Ny mahery tsy maody, tsy ela velona… | NewsMada
Ny mahery tsy maody, tsy ela velona…
Hatramin’izao, mitohy ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Mbola ao anatiny tanteraka izao. Mihasarotra sy mihamafy aza izany amin’izao faramparany izao: vanim-potoana ririnina, mahazo vahana ho azy ny tsimokaretina; misy hatrany ny tranga vaovao amin’ny fitondrana izany.
Na izany aza, inoana fa tsy maintsy hifarana ny ady na ho ela na ho haingana. Raha tsy izany, ilaina ny mahay miara-miaina amin’ny aretina amin’ny fiainana andavanandro. Eo ihany izay fiaraha-manatrika ny fahavalo iombonana tsy hita maso izay fa eo koa ny fahavalo tsy takona afenina sy ilam-pitandremana.
Hatramin’izao, tsy ilaozan’izay fatra-panakiana ny paikady arahina hatramin’izay. Ao ny tsy manao afa-tsy ny manome tsiny amin’izay mitranga sy atao rehetra; eny, na tsy hita akory aza izay ataony afa-tsy izay. Ny sasany indray, tsy manao afa-tsy ny manakivy sy manatsatso, manely vaovao tsy marina.
Mandeha avokoa ny karazan-dresaka tsy hita hohamarinina rehetra izao amin’izany: tsy voafehy, hono, ny valanaretina; tsy marina, hono, ny tarehimarika mivoaka; matin’ny hanoanana noho ny fihibohana, hono, ny vahoaka, na tsy matin’ny aretina aza; tsy ho resy, hono, io, raha izao no mitohy.
Izany rehetra izany, mbola karazana tsimokaretina hafa inian’ny sasany afafy etsy sy eroa. Toa marina sady hoe mahita sy mahalala ary mitsinjo vahoaka amin’izao fahasahiranana izao, nefa… Fitaka bevava! Manakivy sy mampiraviravy tanana ambony ihany tsinona fa tsy mankahery velively.
Ny tena no mila mitandrina fa misy ny miandry kendry tohina fotsiny amin’izay mety ho fahavoazana sy tsy fahombiazana amin’izay rehetra atao amin’izao. Mila fijoroana izany, fanohizana sy famitana hatramin’ny farany izay efa natomboka. Mahery tsy maody, tsy ela velona na maty ho azy.
Na ahoana na ahoana: tsy maintsy hifarana sy hofaranana ny ady, tsy maintsy hatrehina ny fanarenana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Miara-dalana amin’izany ny asa fampandrosoana. Ho hitan’ny havany eo izay tsy nanao afa-tsy nitazana niandry fahavoazana amin’izao ady izao?